လူတွေရဲ့အာရုံထဲမှာမှေးမှိန်လာစပြုလာတဲ့ ရာဇဝင်တွင် ယန်း 300 million မှုခင်း !! - JAPO Japanese News
ဟူး 13 Jan 2021, 15:17 ညနေ
၁၉၆၈ ခုနှစ် ၁၂ လပိုင်း ၁၀ ရက်နေ့၊ ဂျပန်တစ်ခွင်ကိုတုန်လှုပ်သွားစေတဲ့ မှုခင်းတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
Tokyo Shibaura Electric (လက်ရှိ Toshiba) Fuchu စက်ရုံအလုပ်သမားရဲ့ bonus ဖြစ်တဲ့၊ ခန့်မှန်းချေ ယန်း300 million လောက်အလုခံလိုက်ရ‌ပေမဲ့၊ အကြမ်းဖက်မှုလုံးဝမရှိဘဲ ဒီငွေတွေကိုပဲလုယူသွားတာဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဖြစ်စဥ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး လုယူခံလိုက်ရတဲ့ bonus ငွေတွေကို အာမခံလုပ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်၊ ဝန်ထမ်းတွေကို ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲပေးနိုင်ခဲ့သလို၊ အာမခံကုမ္ပဏီဟာလည်း အာမခံများပိုရရှိလာကာ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအာမခံကုမ္ပဏီများဟာ အာမခံငွေကိုစုပေါင်းပြီးပေးတာကြောင့်၊ အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသူလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီအပြင် ဒီအမှုရဲ့တရားခံကို ဟီးရိုးသဖွယ်ဖော်ပြလာတဲ့ မီဒီယာတောင်ရှိခဲ့ပါတယ်.
မျက်မှောက်ခေတ်တန်ဖိုးနဲ့ဆို ယန်း ၁ billion ခန့်လောက်သွားတူညီတဲ့ ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကို ဘယ်လိုခိုးယူသွားခဲ့သလဲ ?
၁၂ လပိုင်း ၆ ရက်နေ့
Japan Trust Bank (နောက်ပိုင်း Mitsubishi UFJ Trust Bank) Kokubunji ဘဏ်ခွဲရဲ့မန်နေဂျာဆီသို့ ခြိမ်းခြောက်စာတစ်ခုဝင်လာခဲ့တယ်။
“ မနက်ဖြန်ညနေ ၅ နာရီ၊ ချိန်းထားတဲ့နေရာမှာ ယန်းသောင်း ၃၀၀ ကို ဘဏ်ကကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ထည့်ပေးလိုက်။
မယူလာဘူးဆိုရင် ဌာနခွဲမန်နေဂျာရဲ့အိမ်ကို ဖေါက်ခွဲပစ်မယ်။”
ရဲအရာရှိပေါင်း အယောက် ၅၀ လောက်စစ်ဆေးရှာဖွေခဲ့ကြပေမဲ့၊ တရားခံကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
နောက် ၄ ရက်ကြာ၊ အချိန်အားဖြင့် ၁၀ ရက်နေ့နံနက် ၉ နာရီမိနစ် ၃၀
ဒီဘဏ်ကနေ bonus အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ငွေသား ယန်း 300 million ခန့်တင်‌ဆောင်လာတဲ့ကားဟာ ပို့ရမယ့်နေရာဆီသွားနေစဥ် လမ်းမှာအဖြူရောင်ရဲဆိုင်ကယ်တစ်စီးဟာ ကားကိုတားလိုက်ပါတယ်။
ရဲဟာယာဥ်မောင်းသူကို “ ဌာနခွဲမန်နေဂျာရဲ့အိမ်ဖေါက်ခွဲခံလိုက်ရပြီး၊ ဒီကားထဲမှာလည်း ဗုံးပါလာတယ်” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဌာနခွဲမန်နေဂျာရဲ့အိမ်လည်း ဖေါက်ခွဲမခံရပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ ရက်မတိုင်ခင်က ဗုံးခွဲမယ့်အသိပေးစာကလည်း ဒီစကားကိုအယုံသွင်းဖို့လုပ်ကြံထားတဲ့ ထောင်ချောက်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်.
နောက်ပြီး ကားကိုစစ်ဆေးရင်း မီးခိုးငွေ့ဗုံးကိုလျှို့ဝှက်ယူလာကာ ကားအောက်ကနေအငွေ့တွေတက်လာစေခဲ့ပါတယ်။
ငွေသားတင်ဆောင်လာတဲ့ကားရဲ့ယာဥ်မောင်းကို ကားပေါ်ကနေဆင်းပြေးအောင် ခြောက်လန့်လိုက်ပြီး၊ ထိုရဲဟာရုတ်တရက်ဆိုသလို ကားကိုမောင်းပြေးသွားပါတော့တယ်။
ထိုအခါ ရဲအတုမှန်းသိသွားပြီး၊ ရဲဆိုင်ကယ်အတုကိုလည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုဆိုင်ကယ်နဲ့အတူ မောင်းပြေးသွားတဲ့ကားကို ပစ်ထားခဲ့တဲ့နေရာမှာရှိခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းလိုက်ရင်း..
အခု ၁၀၀ ထက်မကသောသက်သေခံပစ္စည်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့တာကြောင့် တရားခံကိုချက်ခြင်းဖော်ထုတ်နိုင်မှာပဲလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့၊ သရုပ်မှန်ကိုဘယ်လိုမှမရှာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါကတော့ ငွေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဥ်မောင်းမြင်လိုက်တဲ့ တရားခံရဲအတုရဲ့မျက်နှာဖြစ်ဟန်ရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသောသဲလွန်စပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ငွေအများကြီးကို လုယူခံလိုက်ရပြီး မဖမ်းနိုင်ရကောင်းလား? ဆိုပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ အပူတပြင်းဖြစ်ရသလို၊ သံသယရှိသူပေါင်း ၁ သိန်း ၁သောင်းထိဖော်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ပါဝင်စစ်ဆေးကြတဲ့ရဲတွေဟာ စုစုပေါင်း ၁ သိန်း ၇ သောင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအမှုအတွက် ၇ နှစ်တာစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ကုန်ကျစာရိတ်က ယန်းသန်း ၉၀၀ ကျော်ခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် တရားခံကိုဖမ်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သလို၊ လုယူသွားတဲ့ငွေစက္ကူတွေကိုလည်း အသုံးပြုလိုက်တဲ့သက်သေအထောက်အထားလည်း ရှာမတွေ့ပြန်ပါဘူး။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟာ တစ်ဦးတည်းလာ၊ ဒါမှမဟုတ်အများလား? ဆိုတာကိုတောင်မသိရဘဲ၊ နောက်ဆုံး အနှစ် ၂၀ ကန့်သတ်ချက်ဆိုင်ရာဥပဒေပြဌာန်းခဲ့တဲ့အချိန်ကာလလွန်သွားပြီး၊ မဖြေရှင်းနိုင်ဘဲအမှုပိတ်လိုက်ရပါတယ်။
တရားခံကိုမဖမ်းနိုင်ခဲ့သလို၊ လုယူသွားတဲ့ငွေသားတွေဟာလည်း သူ့အပိုင်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
ဒီလိုဖြစ်စဥ်ထဲမှာ မီဒီယာပေါ်ပြင်းထန်စွာရှုံ့ချခြင်းခံရတာကြောင့် ရဲအရာရှိတစ်ဦးမိမိကိုယ်ကိုသတ်သေသွားသလို၊ အလုပ်အလွန်အကျွံလုပ်ပြီးသေဆုံးသွားသူ ၂ ဦးတောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီအမှုနဲ့တော့မဆိုင်ပေမဲ့၊ ၎င်းရဲ့ပရောဂကြောင့်ပဲ လူ ၃ ယောက်ရဲ့အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ပြီး ရာဇဝတ်သားအစစ်လို့ပြောတဲ့လူတစ်ယောက်ဆီကနေ အပတ်စဥ်မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာဌာနထံသို့ ဝတ္ထုတစ်ခုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ထိုအထဲမှာ Shirota ဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟာ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။
နောက်ပြီး ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာတော့ ရဲဌာနကတရားဝင်မကြေငြာတဲ့အရာ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူနဲ့တရားခံကလွဲပြီး ဘယ်သူမှမသိနိုင်တဲ့အချက်အလက်ကိုပါ ထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။
မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာဌာနကနေ Shirota နဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာ အင်တာဗျူးလုပ်ချင်ပါကြောင်း ကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့အခါ၊ ဒီလိုအဖြေကိုပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
တရားခံအစစ်က နောက်တဖန်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး !!
တရားခံကိုတောင်မသိလိုက်ရသလို ယန်းသန်း ၃၀၀ အသုံးပြုလိုက်ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
မျက်မှောက်ခေတ်မှာတော့ ငွေစက္ကူတွေကိုပြောင်းလိုက်တာကြောင့်၊ အကယ်၍ထိုငွေတွေကိုသုံးမိခဲ့ရင် သင်ဟာဖော်ထုတ်ခြင်းခံရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေဟာ ဒီအမှုကိုဒရမ်မာနဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်ထားပါတယ်။ ထိုအထဲမှာရောအမှန်တရားနဲ့နီးစပ်သူ ရှိနေမလား?
အရာအားလုံးက လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်မှုတွေသာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်း၊ ဂျပန်သမိုင်းမှာမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဒီအမှုကြီးက ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့မယ်။
ဂျပန်ငွေစက္ကူတို့၏ အတုအပကာကွယ်ထားမှု (ယန်း ၁၀၀၀ တန်ကိုအလင်းဖောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့)